Barcelona Oo Soo Bandhigtay Seddexda Bartilmaameed Ee Ugu Sareysa Bisha Janaayo
HomeHoryaalka IngiriiskaBarcelona oo soo bandhigtay seddexda bartilmaameed ee ugu sareysa bisha Janaayo
January 5, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay Georginio Wijnaldum , Memphis Depay iyo Eric Garcia inay yihiin seddexda bartilmaameed ee ugu sareysa suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Kooxda reer Catalans ee lacagta ku liidata – oo fadhisa kaalinta shanaad ee kala sarreynta La Liga – ayaa la filayaa inay xoojiso kooxdeeda bishaan ka dib bilow xun oo ay ku bilaabatay ololahooda 2020-21.
Wijnaldum, Depay iyo Garcia ayaa dhammaantood qarka u saaran inay noqdaan wakiillo xor ah xagaaga, laakiin Sky Sports News ayaa sheeganeysa in Barcelona ay ka go’an tahay inay seddexdaas xiddig hesho bishaan.
Si kastaba ha noqotee, warbixinta ayaa intaas ku dareysa in u dhaqaaqista seddexda ciyaaryahanba aysan u muuqan inay miro dhal noqon doonaan ilaa xagaaga, inkastoo seddexda ciyaaryahan ay haatan awoodaan inay gorgortamaan oo ay heshiisyo horudhac ah la galaan kooxaha kale ka dib markii ay galeen lixda bilood ee ugu dambeysay heshiisyadooda.
Pep Guardiola ayaa qirtay in Garcia ay u badan tahay inuu baxo ka dib markii uu diiday qandaraaska cusub ee Manchester City , halka Depay aan la fileynin inuu baxo bishaan iyadoo Lyon ay hogaamineyso Ligue 1.
Dhanka kale, warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in Wijnaldum uu doonayo inuu sii joogo Liverpool , laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa heysta qandaraas ka tarjumeyso qiimaha uu u leeyahay kooxda.
Ciyaartoyda Fringe ee Barcelona sida Samuel Umtiti , Junior Firpo iyo Riqui Puig ayaa loo maleynayaa in laga dhaqaajin doono si ay u helaan lacagaha lagama maarmaanka u ah ganacsiga bisha Janaayo.